Qaybta 1.What System soo celin samayn karto iyo noocyada Faylal ay u soo kaban karto?
Qaybta 2.How si ay u sameeyaan kaabta u System soo celi?
Qaybta 3.How inuu ka soo kabsado files tirtiray la kaabta ka System Soo Celinta?
Talooyin Qaybta 4.Further iyo aqoon ku saabsan Nidaamka Soo Celinta
Waxaan dhamaanteen isticmaali laptops iyo desktops maalin kasta oo waxa ay noqotay lagama maarmaan waqti. Waxaan u baahanahay si loo soo dajiyo barnaamij cusub oo files, iyo dhirta internet-ka iyo halka sidaas samaynaya habka aan caadi ahayn ama aad u gaabis ah u dhaqmi karaan. Nidaamka Soo Celinta wax yaabahan ee Windows in si toos ah oo taageeray nidaamka iyo diiwaanka files marka aad rakibi Softwares cusub ama wadayaasha si haddii aad dareento isbedel ah ee waxqabadka nidaamka ee aad dib ugu soo celin karaan si ay hal dhibic marka software ama darawal aan goob joog ka ahaa. Waxaa jiri kara sababo badan taas oo laga yaabo in aad rabto in aad u qabtaan nidaamka soo celiyo oo xal u noqon karta dhibaatada.
Part 1 Waa maxay System Soo Celinta samayn karto iyo noocyada Faylal ay u soo kaban karto?
Waa maxay System Soo Celinta run ahaanti waa waxa aad ka caawinaysaa in ay soo celiso nidaamka files your computer ayaa hal dhibic hore ee waqtiga. Waxay abuurtaa a soo celin dhibic kaliya ka hor taariikhda iyo waqtiga markii aad bilowday ogaanaya dhibaatooyinka ka jira nidaamka. Waxa uu isticmaalaa feature ugu baaqay ilaalinta nidaamka oo si joogto ah u abuuraa iyo badbaadiyay soo celin dhibcood on your computer ah.
Nidaamka Soo Celinta waxaa loo isticmaali karaa inuu ka soo kabsado Windows faylasha nidaamka, barnaamijyada, iyo goobaha diiwaanka lagu rakibay habka. Waxa kale oo ay isbedel ku files Dufcaddii, qoraallo iyo dhammaan noocyada kale ee files eedeysanuhu abuuray ku saabsan habka sameeyo. Waxaa ma saamayn aad files shakhsiyeed oo ay isku sii. Laakiin nidaamka celin ma kaa caawin kara inaad si loo soo celiyo aad files shakhsiyeed sida e-mail, waraaqaha, ama sawiro haddii ay lumaan.
Part 2 Sida loo sameeyo ee kaabta u System Soo Celinta?
In la abuuro gurmad ah ama soo celin dhibcood aad u baahan tahay in la raaco tallaabooyinka hoos ku qoran:
Riix "Start" badhanka on desktop. Marka menu bilowga u muuqataa, xaq u riix qaybta 'Computer'.
Dhibic A hoos menu muuqataa. Riix 'Guryaha' oo kor u furmay a 'System iyo daaha Security' cusub.
In screen cusub guji joogo 'Protection System' dhinaca bidix ee shaashadda. Daaqad cusub ayaa u muuqda magacaabay 'Nidaamka Guryaha'.
Riix ikhtiyaarka 'Abuur' laga heli karaa hoose si ay u abuuraan gurmad ah ama soo celin dhibic. Screen A cusub u muuqataa weydiisanaya sharaxaad ka mid ah barta ugu soo celin.
Ku qor sharaxaad aad rabto in aad siin bannaan ee loogu talagalay ka dibna riix 'Abuur'. Menu A muuqataa taas oo ku tusineysa xaalada abuurka ah ee soo celin dhibic. Markii ugu qaataan si ay u abuuraan gurmad ama soo celin dhibic ku xiran tahay qadarka xogta iyo wax qabadka iyo xawaaraha habka iwm
Marka abuurista gurmad la soo dhameeyay, farriin u muuqda leh abuurista soo celin dhibic marka la dhamaystiro. Riix doorasho 'Close' si loo dhamaystiro hawsha.
qaybta 3 Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray la kaabta ka System Soo Celinta?
Files tirtiray si fudud loo soo kabsaday karaa hayaan. Windows abuuraa files gurmad si toos ah waqti ka waqti. Si loo soo celiyo files raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Xaqa guji folder caga ama la wado meesha aad badiyay aad file. Wixii tusaale aad file helay tirtiray ee 'My Documents', markaas xaq guji 'My Documents'. Dhibic A hoos menu muuqataa.
Hoos u riixdaa oo guji 'Guryaha'. Haddii sidaa la sameeyo ilaa laga furay daaqad cusub. In this new window, guji joogo tab ah 'versions Previous' ugu sareysa.
A menu cusub u muuqataa taas oo uu leeyahay hayaan dhowr ah drive gaar ah ama in u socoto waqtiyo kala duwan. Dooro gurmad ah oo aad rabto in aad soo celin adigoo gujinaya ku yaal hal mar.
Marka aad dooro file, riix qaybta 'Soo Celinta ". Farriin u muuqda weydiinaya aad hubto in aad dooneyso in aad soo celin xogta. Guji "Soo Celinta".
Farriin u muuqataa in file si guul ah dib loo soo celiyo oo ku saabsan nidaamka. Riix 'OK' si loo dhamaystiro hawsha.
Qeybta 4 talooyin dheeraad ah oo ku saabsan aqoonta System Soo Celinta
1. Waxaa guud ahaan lagu talinayaa in la isticmaalo software antivirus wanaagsan ku saabsan habka si looga fogaado xaaladaha ka mid ah la isticmaalayo nidaamka la soo celiyo.
2. Waxaa lagu talinayaa in iskaan barnaamijyada iyo darawalada ka hor inta ku rakibidda on habka si looga fogaado hawlaha aan caadi ahayn ee habka.
3. Multiple soo celiyo ama dhibcood gurmad lagu abuuray waa in si faylasha iyo nidaamka lagu soo kabsaday karaa wax ku ool ah ay dhacdo cillad ka mid ah nidaamka.
> Resource > Ladnaansho > System Soo Celinta - System ma Celinta tirto faylasha?